Bilowga Jilicsan - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Qalabka elektaroniga ee bilowga jilicsan
Mid kasta oo ka mid ah laba-tirsareyaashaada ayaa isbarbar dhigaya beddelka lixda thyristors ama saddex qaybood oo MTX ah oo awoodda korantada ah si ay u soosaaraan jaangooyaha saddexda waji leh, oo uu ugu xiro inta u dhexeysa korontada iyo matoorka.
Tusaale ahaan seddex waji oo si buuxda loo xakameeyo wareegga hagaajinta biriijka, marka la adeegsanayo qalab jilicsan si aad u bilowdo mootada, danab soosaarka thyristor ayaa si tartiib tartiib ah u kordha, mootaduna si tartiib tartiib ah ayey u xawaareysaa illaa inta thyristor si buuxda loo qabanayo. Mootadu waxay ku shaqeysaa astaamaha farsamo ee danab la qiimeeyay si loo gaaro bilow wanaagsan, yareynta bilowga bilowga, iskana ilaali inaad bilowdo safarka socda. Markuu gaadhigu gaadho xawaaraha la qiimeeyay, hawsha bilowgu way dhammaataa, bilowga jilicsanna wuxuu si toos ah ugu beddelaa thyristor-ka xiriiriye dhinac ah si uu u siiyo danab lagu qiimeeyo hawlgalka caadiga ah ee matoorka si loo yareeyo luminta kuleylka ee thyristor loona kordhiyo nolosha adeegga bilowga jilicsan, hagaajinta waxtarka shaqada isla markaana iska ilaali wasakheynta iswaafajinta ee shabakadda korantada.
Bilawga jilicsan ayaa sidoo kale bixin kara shaqeyn joogsi jilicsan oo ka soo horjeedda habka bilowga jilicsan. Danab si tartiib tartiib ah ayuu u yaraadaa xawaareyna si tartiib tartiib ah hoos ugu noqdaa eber si looga fogaado naxdinta laxaadka leh ee ay keento joogsiga bilaashka ah. Markaad isticmaaleyso bilow jilicsan, bilowga bilowgu guud ahaan waa 2 ~ 3 jeer oo ah midka hadda la qiimeeyay, heerka isbedbeddelka korantada ee korantada guud ahaan waa 10% gudahood, saameynta qalabka kalena waa mid aad u yar.
Dayactirka maalinlaha ah, fiiro gaar ah u yeelo inaad eegto xaaladaha deegaanka ee bilowga jilicsan badanaa. Fiiro u yeelo si aad u hubiso inay jiraan waxyaabo ku hareeraysan bilowga jilicsan ee hor istaagaya hawo-qaadashadeeda iyo kala-baxa kuleylka, iyo inaad hubiso inay jirto meel ku filan hareeraha jilicsan (in ka badan 150mm), si joogto ah u hubi haddii boosteejooyinka khadka qaybintu ay furan yihiin, si joogto ah u nadiifi boodh si looga fogaado inay saameyn ku yeelato kala-baxa kuleylka isla markaana looga hortago in thyristor-ka uu waxyeello soo gaaro heerkulka xad-dhaafka ah ee kordhay awgeed. Isla mar ahaantaana, waxay ka fogaan kartaa daadashada iyo shilalka gaagaaban ee gaaska sababa.
Yourristor wuxuu u shaqeeyay sidii xeerka danab ee AC ee jilicsanaanta bilowga ah. Codsiga danab hooseeya (danab galinta: 380V), horay iyo gadaal u soo noqnoqoshada danab la qiimeeyay (VDRM, VRRM) waxaa lagu talinayaa in la doorto 1200V. Codsiga danab dhexdhexaadka ah (danab gelinta: 660V), horay iyo gadaal u soo noqnoqoshada danab la qiimeeyay (VDRM, VRRM) waxaa lagu talinayaa in la doorto 2200V ama wixii ka sareeya. Codsiga korantada sare (danab gelinta ≥1100V), horay iyo gadaal u soo noqo danab la qiimeeyay (VDRM, VRRM) waxaa lagu talinayaa in la doorto 3500V ama wixii ka sareeya. Si aad uhesho 6KV ama 10KV jilicsan, danab sare wuxuu ubaahanyahay thyristors inuu isbarbar dhigo iskuxirka gadaal kadibna taxanaha iskuxira. 6KV jilicsanaanta bilowga ah wuxuu ubaahanyahay 6 thyristors (2 thyristors isku mid ah oo iskuxirnaa iskuna badala 3 koox). 10KV bilowga jilicsan wuxuu ubaahanyahay 10 thyristors (2 thyristors isku mid ah oo iskuxirnaansho iskugudub 5 koox). Nooca noocan oo kale ah ee iska caabinta 'thyristor' kasta wuxuu noqon doonaa 2000V iyo danab horey u soo noqnoqday oo aan horay loo soo celin - VDSM iyo VRSM thyristor ee la xushay waa inuu ka badnaadaa 6500V.
Runau Elektaroniga ayaa khabiir ku ah bixinta thyristor iyo module-ka koronto bilowga jilicsan gaar ahaan xilligan xaadirka ah (in kabadan 3000A) iyo danab sare (in kabadan 6000V). Tayada la isku halleyn karo iyo awoodda adag waxay awood u siineysaa maalgashiga ugu yar si loo xaqiijiyo waxqabadka ugu sarreeya. Hoos-u-dhaca tamar-darrada hoose ee wax-qabadka, awoodda ka-awood badan ee hadda jirta, saameynta sare iyo iska caabbinta danab, dhammaan sifooyinka kor ku xusan ee Runau thyristor waxay ku qanacsan yihiin shuruudaha caalamiga ah ee bilowga jilicsanaanta codsi dhammaystiran.
Thyristor Xulista Ku talin Rtixraac
Bilowga jilicsan ee loo adeegsaday Thyristor (VDRM / VRRM)
Mootada Lagu qiimeeyay Ie (A)
Bilowga Jilicsan ee Loo Adeegsaday Thyristor ITAV (A)